Mayelana NATHI - Quanzhou Morton Machinery Co., Ltd.
Inkampani kaMorton Machine ngenxa yesipiliyoni nokuzinikela kwabasebenzi bethu. Sinokujula kokuhlangenwe nakho kokuhlinzeka ukwesekwa cishe kunoma yisiphi isimo esingacatshangwa; kusuka ekukhethweni kwempahla eluhlaza, ukuqeqeshwa, uhlelo lwekhompyutha kanye nokulungiswa komshini esizeni kuya kusekelo lobuchwepheshe kanye nensizakalo.
IMorton Machine isekela impumelelo yamakhasimende ethu kanye nabamele ngokuletha imishini yokweluka esezingeni eliphakeme nangendlela enesizotha, nokugcina ubudlelwane obunokwethenjelwa nobunesizotha nabalingani bethu.
Hlola impahla yawo wonke ama-oda bese ugcina irekhodi lesheke.
Izingxenye zonke zifakwa esitokisini ngobunono, umgcini wesitoko uthatha amanothi akho konke okuphumayo kanye ne-instock.
Thatha irekhodi layo yonke inqubo negama lesisebenzi, ungathola umuntu obhekene nesinyathelo.
Ukuhlolwa komshini ngokuqinile ngaphambi kokulethwa kwawo wonke umshini. Umbiko, isithombe nevidiyo kuzonikezwa ikhasimende.
Ithimba lobuchwepheshe eliqeqeshiwe neliphakeme, ukumiswa kocingo olumisiwe kuyindlela yethu entsha, ukusebenza okuphezulu kokumelana nokushisa, ukusebenza okuphezulu kokumelana nokushisa.
Isikhathi sewaranti unyaka owodwa, inqubomgomo yesiqinisekiso izothunyelwa nge-imeyili ehlukanisiwe.
Alikho i-oda elincane, alikho ikhasimende elincane, wonke amakhasimende ayikhasimende le-VVVIP kithi.
Akugcini ngokuthengwa kwamakhasimende kuphela nomlingani webhizinisi. UMorton uzohlinzeka ngokusekelwa okugcwele kokwandiswa kwebhizinisi lakho.
Isevisi esheshayo: Isevisi eku-inthanethi engama-24 phendula imibuzo yakho ngesikhathi sokuqala.
Ikhotheshini nenketho kuzonikezwa ngokushesha okukhulu uma usuthole uphenyo lwakho.
Isiphakamiso sobuchwepheshe: ngokuya ngesimo sakho sokusebenza, sinikeza izinketho ezifanele kakhulu ekukhetheni kwakho, futhi sinamathela ekunikezeleni ukukhiqizwa okwenzelwe wena.
Ukuxhumana okuhle: Amantombazane okuthengisa aphakeme afundile wonke ane-English Grade Certification.
Impela uma ukhuluma isiRussia, isiFulentshi noma iSpanishi, abahumushi bethu abakhethekile bakunikeza insizakalo esondelene kakhulu.
Okuhlangenwe Nakho Kwebhizinisi: Konke ukuthengisa okunesipiliyoni seminyaka engaphezu kwengu-3 sokuthekelisa, okujwayelene nenqubomgomo yokuthekelisa kanye nenqubo yokungenisa kuzwelonke, kukusiza ukuthi wenze imvume yamakhasimende nenqubo yokungenisa ngokushelela.